बानपाको नगर परिषदमा हो हल्ला, हाकिमलाई कालोमोसो लगाउने चेतावनी ! – ebaglung.com
बानपाको नगर परिषदमा हो हल्ला, हाकिमलाई कालोमोसो लगाउने चेतावनी !
२०७३ पुष २८, बिहीबार १५:२४	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार
खगेन्द्र विश्वकर्मा, बागलुङ २०७३ पुस २८ । बागलुङ नगरपालिकाको २२ औ नगर परिषद (सार्वजनिकीकरण समारोह)नगरवासीको बिरोधका कारण सुचारु हुन सकेको छैन । विहिबार स्थानीय राधाकृष्ण मन्दिरको सभाहलमा सुरु हुन लागेको नगरपरिषदमा भेला भएका नगरवासीहरुले नगर क्षेत्र भित्रका जग्गाको नापीनक्शाको विषयलाई लिएर कार्यकारी अधिकृत युवराज अधिकारी लगायत कर्मचारीको बिरुद्ध नारावाजी गर्दै बिरोधमा उत्रिएपछी वातावरण अन्यौलमय बनेको हो ।
नगरपरिषद कार्यक्रममा स्थानीय विकास अधिकारी रामप्रसाद आचार्य, सहायक प्रजिअ ध्रुब गिरीको उपस्थिति भएका थिए उनिहरुकै समुपस्थितमा नगरवासीहरुले नगरहाकिम लगायतका बिरुद्ध नारावाजी गरेका थिए ।
प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार नगरवासीले सभास्थल बाहिर नगर हाम्रो हो, सुन्दर नगरको माया हामीलाई छ । नापी नक्सामा अनियमीतता गरेर नगरको सुन्दरता विगार्न पाईदैन भन्दै नगरवासीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । उनीहरुले कसैको सडक नजीकै घर निमार्णमा मापदण्ड विपरीत नक्सा पास गरी दिएको र कसैको नगरेको भन्दै नगर हाकिमसंग स्पष्टककरण मागेका थिए ।
नगरवासीले यस विषयमा छलफन नभए सम्म परिषद अगाडी बढन नदिने भन्दै यसलाई छलफलमा नलगेमा नगर हामीमलाई कालो मोसो र चप्पलको माला लगाउछौ भनेर उफ्रिएका थिए । यतीकैमा नगरपालिकाका कर्मचारीले पार्टीप्रतिनिधीहरुलाई खोजेका थिए । यस्तैमा परिषदको माईक लिएर बसन्त कुमार श्रेष्ठले नेपाली काँग्रसको प्रतिनीधी म बसन्त कुमार श्रेष्ठ उपस्थित छँदै छु भन्दै कराएका थिए । त्यसपछी नगरपालिकाका हाकीमले सितल पार्टी प्यालेसमा भएर बैठक बस्ने अनुरोध गरेका थिए तर नगरबासीले यही छलफल गर्नु पर्ने अनुरोध गरे पछी नगरपालिका प्रमुख र राजनितिक दलका प्रतिधिनीहरु छलफल भैरहेको छ। यो समाचार तयार पार्दा सम्म छलफल जारी छ ।
बन्य जन्तुको शिकार खेल्न गएका शिकारी, आफैलाई गोली लागेर गम्भीर !
बागलुङका एमाले निकट उद्योगी व्यवसायीहरु संगठित !